á€›á€²á€›á€²á€›á€„á€¹á€·á€›á€„á€¹á€·á€±á€»á€•á€¬á¾á€€á€¬á€¸á€á€ºá€€á€¹ .. ..-[ á€±á€’á€«á€€á€¹á€á€¬á€á€ºá€…á€¹á€„á€šá€¹ ]
ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းကတော့ မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုကြတာပါပဲ .. ..
ဒါပေမယ့် အလုပ်နဲ့ မကြည်ညိုတတ်ရင် စိတ်မချရတဲ့သဘောလို့ မိမိကတော့ ဒီလိုပဲ ခံယူနားလည် ထားမိပါတယ်။ မိမိတို့ဆိုတာကတော့ သူလို ကိုယ်လို မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ အခါကျတော့ မြတ်စွာဘုရားကို အရမ်းကြည်ညို သွားတာပါပဲ။
ကြည်လည်း ကြည်ညိုတတ်တဲ့သဘော ဖြစ်သွားတာပေါ့။
ကိုယ်က ကြည်ညိုတတ်တယ်ဆိုတော့ သူများက မကြည်ညို တတ်ဘူးလိုလို ဘာလိုလို ဖြစ်သွားတာပေါ့လို့ တစ်ချို့ကလည်း ယူချင်ယူလိမ့်မယ်။
အမှန်ကတော့ အခု​ မိမိကိုတောင် ပြောနေကြသေးတယ် “ဘုရားဟောတဲ့ တရားတွေလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ .. ..” လို့ ဘာတို့ ပေါ့လေ .. .. အဲဒီလို ပြောနေကြတယ်။
ယောဂီများ ဒီကိစ္စက နည်းနည်း နက်နဲတယ်။ ပြောပြပါမယ် -
- မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်က မော်တော်ဆိုင်ကယ် မရှိဘူးပေါ့နော် – (ဥပမာ ပြောတာပါ။) ဒီအခါကျ မော်တော်ဆိုင်ကယ် မစီးရဘူးလို့ ၀ိနည်းပညတ်ထဲ တိုက်ရိုက်မပါဘူးလို့ ဆိုကြပါစို့ – (ဥပမာ ပြောတာပါနော်) ဒါပေမယ့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ရှိလာတဲ့ ဒီခေတ်မှာ တင့်တယ်သပ္ပာယ်စဖွယ် ဖြစ်အောင်ကတော့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို အကြောင်းမဲ့ စီးဖို့တော့ မသင့်တော်ဖူးလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း နားလည်ကြတာပဲ .. ..
ဒါကို တစ်ချို့ ဓမ္မကထိကတွေတောင် နားမလည်ဘူး။ သူတို့က – ဘုရားမဟောရင် ဘုရားဟော မဟုတ်ဘူး ဆိုတာမျိုး ပြောကြတယ်။
တကယ်တော့ ဒါဟာ မှားနေတယ်။
မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အကျင့်နဲ့ ကြည်ညိုတတ်ဖို့ လိုတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သိပ္ပံနည်းနည်းတတ်တော့ သူတို့နားမလည်တာကို သိတာပေ့ါလေ .. .. ခက်တာက သူတို့က သိပ္ပံလည်း မတတ်ဘူး။ သူတို့က Implication ဆိုတာလည်း နားမလည်ဘူး၊ ယုတ္တိဗေဒလည်း မတတ်ဘူး၊ ဒဿနိကလည်း မတတ်ဘူးပေ့ါနော် .. .. Implication ဆိုတာ အကျုံးဝင်တာပေါ့နော် – “လူအားလုံး သေမျိုး” ဆိုတော့ လူတစ်ယောက် မွေးလာရင် သူ သေရမယ်ဆိုတာ – ဒါ ဆွဲယူလို့ ရတာပေါ့။
သူတို့က Implication ယုတ္တိဗေဒလည်း မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ ဒီတော့ မိမိပြောတဲ့ စကားတွေကို – ဥပမာ—- “ပေါ်စိတ်အနိစ္စရှု” ဒီလို ပြောတယ်။
ဒါကို ဘုရား မဟောဘူးဆိုတော့ သူတို့က တော်တော်တော့ ဂွကျတာပဲ .. .. ဒီလို ပြောကြစတမ်းဆိုရင် – “ဒီပါဠိတွေကလည်း မြတ်စွာဘုရား နုတ်ကပါတ်တော်က တိုက်ရိုက်ဟောတာ ဟုတ်ရဲ့လား??” လို့ မေးခွန်းထွက်လာရင် သူတို့နာမယ်။
တကယ်တော့ “ပေါ်စိတ်အနိစ္စရှု” ဆိုတာ ဘုရားဟောနဲ့ ညီညွတ်နေတာကို – ဒါ ဘုရားဟော မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတော့၊ ရူးကြောင် မူးကြောင်နဲ့ ပြောသလို ဖြစ်နေ တာပေါ့။
ပေါ်စိတ်အနိစ္စရှုလို့ ကျွန်တော်တို့ဆို တော်တော်အောင်မြင်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို အနိစ္စရှုတတ်ပြီးတဲ့နောက် ဒါဟာ ကျေပျက်စရာအရာလို့ နားလည်နေပြီ၊
ဘယ်လောက်အဆင့်မြင့်လဲ - သူတို့ဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို ရှုရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး။
ဒါပေမယ့်လည်း ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်နေသေးတယ် ဘုရားဟော မဟုတ်ဘူး ဘုရားဟော မဟုတ်ဘူးနဲ့ .. .. ခက်တာက သူခိုးက လူလူဟစ်နေတော့ လောကကြီးမှာ တော်တော် ဂွကျတယ်။
အဲဒီ သီတဂူ ဆိုတာ တော်တော်ဆိုးတာပဲ၊ တကယ်တော့ သူဟာ အောင်မြင်နေတာပဲ။ အဲဒီ အောင်မြင်နေတဲ့ ကြားထဲက ကျွန်တော့်မကောင်းကို လိုက်ပြောနေတယ်။ အံသြစရာလည်း သိပ်ကောင်းတာပဲ ကမ္ဘာက ကျဉ်းကျဉ်းလေး၊ သူ မကောင်း လိုက်ပြောတာကို ကျွန်တော့် ယောဂီတွေက ကြားရတာပေါ့ .. .. ကျွန်တော်ဆီကို တိုက်ရိုက် ပြန်ပြောတယ်။
သူဟာ ဒီလောက် အောင်မြင်နေတဲ့ ကြားထဲက ကျွန်တော့်ကိုဘာလို့ တိုက်နေတာလည်း၊ ပိတ်နေတာလည်း ကျွန်တော် စဉ်းစားလို့ကို မရဘူး။ သူသိက္ခာကျတာပေါ့၊ ဓမ္မကထိကကြီး လုပ်နေပြီးတော့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို လိုက်ပြီးဖိုက်နေ၊ တိုက်နေတော့ သူပဲ သိက္ခာကျတာပေါ့၊ သူ့လူတွေက ဘယ်လောက် လိုက်နိုင်မှာလည်း။
ကျွန်တော်က အမှန်ပဲ တကယ်ကျင့်လာတာ ကျွန်တော် အနှစ်(၄၀) ၀န်းကျင်ရှိနေပြီ။ ဒီတော့ သူဘယ်လိုလုပ် လိုက်နိုင်မှာလည်း သူတို့က အခုထက်ထိတောင် ၀ိပဿနာကို ကျင့်ဖူးတာမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့။
ကျင့်ဖူးတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် မေးခွန်းတစ်ခွန်းပဲ မေးမယ် –
“တရားကို ဘာနဲ့ရှုသလဲ?” လို့
ဒါဆို သူတို့သေမှာ – ကျွန်တော် မပြောချင်လို့ .. .. ယောဂီများ ဒါတွေ ကျွန်တော်လည်း မပြောချင်ပါဘူး။ (ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာ အကျင့်ကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ဒါတွေ မပြောချင်ဘူး)။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူး၊ ဘာမဟုတ်ဘူး၊ ညာမဟုတ်ဘူးနဲ့ လိုက်ပြီး ပလ္လင်ပေါ်ကနေ တိုက်နေတဲ့အခါ – ကျွန်တော်လည်း မနေသာလို့ ပရိသတ်တွေ အထင်လွဲမှာစိုးလို့ ဖြေရှင်းရတာပါ။
ကျွန်တော် ပြောပြမယ် – ဒီခေတ်ဟာ လက်တွေ့ခေတ် သိပ္ပံခေတ် ဒီတော့ ကျွန်တော်ပြောမယ် -
သတ္တိရှိရင် ဒီအင်တာနက်မှာ နာမည်အရင်းနဲ့ တက်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော် ဒေါက်တာချစ်ငယ် တက်ခဲ့မယ်။ လာပါ သီတဂူ တက်ခဲ့ .. .. လာပါ။
ကဲ မပြောတတ်တဲ့လူ၊ မှားတဲ့လူ၊ ပြောစရာမရှိတဲ့လူ၊ ရှုံးတဲ့လူက ၀န်ခံစတမ်း တပည့်ခံစတမ်း —
ကျွန်တော် challenge လုပ်တယ်ဗျာ —-
ဒီခေတ်ဟာ အမှန်ခေတ်ကြီးပဲ။ အမှန်ခေတ်ဆိုတာ အမှန်ပြောရမှာပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့ ပလ္လင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ လက်တစ်ဆုပ်စာ လူလေးကို လျှောက်ပြီးတော့ သူများအတင်းတွေ လျှောက်ပြောနေတာ – ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ??
တကယ်တော့ တိုင်းပြည်ကို ညာနေတာ၊ သာသနာလည်း ညာနေတာ၊ ဘာသာလည်း ညာနေတာ၊ ဟိန္ဓူအယူအဆတွေနဲ့ ရောပြီးတဲ့နောက် ရိုးသားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စင်တွေကို လိမ်ညာလှည့်ဖျားပြီး မတရားသဖြင့် စည်းရုံးနေတာကို ကျွန်တော်တို့က မြင်တာပေါ့။
(မပြောချင်လို့ နေတာ) အခု ကျွန်တော့်ကို တရားဝင်ပြောလို့ ကျွန်တော်လည်း တရားဝင်ပြောတယ်လေ .. .. ကျွန်တော့်ကို ပလ္လင်ပေါ်က ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း ပြန်ပြောပြီပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်ကို တိုက်ရမှာလဲ?? .. ..
သူအောင်မြင်နေတာ အနေသာကြီးပဲ။ အခုတော့ သူတိုက်တဲ့အခါ သူပဲကွဲမှာပဲ။
ဆိုကြပါစို့ ကျွန်တော်က မီးခြစ်ဗူးလေးဆို သူက ဘန်ကောက်လုံချည် ဆိုကြပါစို့။ ရှေးအစဉ်အလာအတိုင်း ဘန်ကောက်လုံချည်နဲ့ မီးခြစ်ဗူး ရေထဲမျှောကြစို့ဆို ကျွန်တော်က ဘယ်လိုလုပ် စဉ်းစားမှာလဲ – သူသေမှာပေါ့။
ဒါတွေလည်း မစဉ်းစားဘဲနဲ့ ဇွတ်တိုက်နေတာ တော်တော် မိုက်တွင်းနက်တာပဲ။ ရူးကြောင် မူးကြောင်နဲ့ သူများအတင်းတွေ လျှောက်ပြောနေတာ – ဒါ ရပ်တန်းက ရပ်ဖို့ကောင်းတယ်။ မရပ်ရင်တော့ သူ့သိက္ခာ နှစ်ပြားမှရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ — ဒီလိုပဲ ရဲရဲရင့်ရင့် ပြောတယ်။
ဒါ ကျွန်တော့် ယောဂီတွေအပေါ် သစ္စာရှိစွာ ရဲရဲရင့်ရင့် ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။